XADHIGA C/MAALIK MUSE COLDOON & XEERKA XUKUUMADDA ) | Haqabtire News
XADHIGA C/MAALIK MUSE COLDOON & XEERKA XUKUUMADDA )
April 1, 2017 - Written by admin
inkastoo aan kasoo horjeeday tagistii mugdisho ee Cabdi Malik &tageeradisii Farmaajo weli aan qirsanahy waxa lagu soo oogay inay wax jirra yihiin sida uu issagu ba u qirtay ee uu cafiska u waydiistay xukuumada & shacab Ka reer Somaliland oo dhan!!!
Waxaan jecelahay in la cafiyo waayo waxa jirra rag Siyaasiyiin ah oo C/MALIK Ka dambi badan , 20 Sano Ka badan kasoo horjeeday jiritaanka Iyo madax banaanidda Somaliland raggaa Siyaasiyiinta ahi waxay Somaliland kasoo horjeesteen iyadoo Intan Ka Tamar yar dawladd ahaan Iyo shacab ahaanba !!
Waxay raggaa Siyaasiyiinta ahaa ee mugdisho joogay geed gaaban Iyo mid Dheer ba u fuuleen sidii Somaliland ay u bur buri lahayd waxay Warbaahinta usoo Marin jireen hadalo badan oo niyad jab ku ahaa shacabka reer Somaliland !!!
Waligood waxay dhimaan mooyaane shacab &xukuumada toona wax may tarin ,waxay dal badeen cafis waana laga aqbalay waxay maanta Ka muuqdaan xisbiyadda qaranka waxayna saamayn wayn ku leeyihiin siyaasadda Dalka!!!
Samafale Abdimalik muse coldoon marka laga yimaado dembi lagu haysto wuxu wax badan taray shacabkiisa, gaar ahaan kuwa reer BURCO Wuxuu Asaasay urur samafal oo la yidhaah KAALME KUWAN !!!
Wuxuu wax badan oo aan indhaha laga qarsan Karin u qabtay dad badan oo tabaalaysan oo ay la soo deristay marxallado kala duwan !!
sida dad dhimirkaa, dad laxaad koodii Ka maqan yihiin, Dad xanuuno halis ahi ay ku dhaceen,sida HIV & CANCER oo caruur dumar Iyo rag intaba Issugu jirra, dadkeenana Ka midda oo aynaan innagu u war hayn !!
Wuxuu u soo bandhigay dad muxsiniina oo ilaahay dartii wax u baxsadday, Wuxu u uruuriyay dhaqaale, wuxu u dhisay guryo, Wuxuu u iibiyay baa-buur, Wuxuuna lataacaalay dadkaa tabaalaysan !!!
Waxa C/MALIK cafiskiisa xukuumadda ka Dal baday in badan oo Dadkii uu wax taray ka midda ,aqoonyahan Ka ,Suxufiyiinta , Abwaanadda , culimadda , Iyo in badan oo qaybaha bulshadda Ka midda !!!
Lkn xukuumaddu weli dhag jalaq umaysiin !!
maadaama uu C/MALIK aad u dhaliili jiray Dalka aynu jaarka nahay ee ETHIOPIA Aamusnaanta xukuumadda MA Ka dhadhansan karnaa in codsigga bulshadda ee ku Aadan siideynta C/MALIK aanay xukuumadu Awood U lahayn ??
C/MALIK MUUSE COLDOON NA xadhigiisa Ay ETHIOPIA ku lug leedahay ??
Maxamed Ibnu Raxaab